Fivavahana tatsinanana - Wikipedia
Faritra eto an-tany ahitana betsaka ny mpanaraka ny fivavahana tatsinanana ankehitriny (miloko mavo), ampitahaina amin' ny faritra ahitana betsaka ny mpanaraka ny fivavahana abrahamika (miloko mavokely).
Ny fivavahana tatsinanana dia fivavahana nipoitra avy any amin' ny farirtra atsinanana eto amin' izao tontolo izao, dia any Azia Atsinanana sy any Azia Atsimo ary any Azia Atsimo-Atsinanana, izay misy fahasamihafana lehibe amin' ny fivavahana tandrefana sy ny fivavahana afrikana ary ny fivavahana iraniana. Ao anatin' ny vondron' ny fivavahana tatsinana ny fivavahana any Azia Atsinanana (toy ny sintôisma, ny sindôisma, ny taôisma ary ny kônfosianisma), ny fivavahana indiana (toy ny hindoisma, ny bodisma, ny sikisma ary ny jainisma) ary ny fivavahana animista samihafa.
1 Fivavahana indiana
2 Fivavahana any Azia Atsimo-Atsinanana
Fivavahana indiana[hanova | hanova ny fango]
Ny hindoisma dia fivavahana sy filôzôfia ary fomba fiainana mbola be mpanaraka izay nipoitra ao amin' ny Zana-kôntinenta Indiana. Isan' ireo fivavahana tranainy indrindra eran' izao tontolo izao izay mbola misy manaraka izy. Ny ankamaroan' ny Hindoa dia mino ny fahefan' ireo boky atao hoe Veda  izay ekeny fa nambara tamin' ny olombelona "tsy araka ny fomban' olombelona" (apauruṣeya) tamin' ny alalan' ilay andriamanitra mpamorona atao hoe Brahmā (na Brahmâ) araka ny fandrenesan' ireo Rishi (izany hoe "mpahita"). Mampiavaka ny hindoisma ny toetrany izay ahitana fanambarana karazana finoana sy fanao avy amin' ny fivavahana samihafa (sinkretisma). Ao amin' ny zana-kôntinenta indiana no tena betsaka mpanaraka ny hindoisma nefa ahitana azy koa ireo toerana ivelan' i India izay ahitana Indiana mpifindra monina toa an' i Afrika Atsinanana sy Atsimo, i Azia Atsimo-Atsinanana, ireo nosy Antilia ary i Angletera.
Tamin' ny taona 2015 dia niisa teo amin' ny 1 100 000 000 ny mpivavaka manaraka ny hindoisma  ao amin' ny firenena miisa 85. Izy no laharana fahatelo amin' ny fivavahana be mpanaraka indrindra aorian' ny kristianisma sy ny silamo. Ireo boky atao hoe Veda no boky masiny, izay misy ny ny ankamaroan' ny fampianarana arahina ao.
Ny bodisma dia fivavahana sady filôzôfia nipoitra avy tao India tamin' ny taonjato faha-5 tal. J.K. noho ny fifohazana ara-panahin' i Siddhartha Gautama sy ny fielezan' ny fampianarany. fivavahana sady filôzôfia izany dia mampianatra ny olona hamarana ny fijaliany amin' ny alalan' ny fanesorana ny fankahalana, ny tsi-fahalalana ary ny fitiavam-bola tafahoatra. Fitambarana fanao misandrahaka ny bodisma ka hita ao ny fandinihan-tena, ny vavaka, ny fanatitra, ny fitandremana ara-pitondrantena, ny hevitra ara-psikôlôjia sy ara-pilôzôfia; ny fampianarana momba ny fahaterahan' izao rehetra izao sy ny fiheverana momba izany, ka ny fomba fijerin' ny "voafoha" (bodhi) no entina manakatra izany rehetra izany. Ny fampianaran' ny bodisma mikasika ny andriamanitra sy ny fomban' andriamanitra dia tsy itoviany amin' ny an' ny fivavahana hafa: azo heverina ho fivavahana tsy manana andriamanitra mpamorona ny bodisma; satria tsy misy firesahana momba izany ao amin' ny ankamaroan' ny sampan' ny bodisma.
Tamin' ny taona 2018 dia niisa 623 tapitrisa ny Bodista maneran-tany, ka io fivavahana io no laharana fahefatra aorian' ny kristianisma sy ny finoana silamo ary ny hindoisma.
Ny sikisma dia fivavahana amin' Andriamanitra tokana naorin' ny Goró Nanak tao amin' ny tapany avaratr' i India tamin' ny taonjato faha-15. Mino Andriamanitra tokana Faratampony ny mpino ao aminy, ka izany Andriamanitra izany dia tsy manam-petra, mandrakizay, mpamorona, anton' ny anton-javatra rehetra, tsy manam-pahavalo, tsy misy fankahalana, izay sady ato amin' izao tontolo izao no ao ivelany sy mihoatra azy (mihoa-draha). Tsy manohitra ny fivavahana kristiana na ny silamo na ny fivavahana hindo ny sikisma fa mihevitra azy ireo ho fomba samy ahafahana mivavaka amin' Andriamanitra.
Ny jainisma dia fivavahana izay mampianatra fa ny tanjon' ny fiainana dia mitovy ho an' ny hindoisma sy ny bodisma ary ny sikisma. Ny mpanaraka io fivavahana io dia tokony hanao tanjona ny fahatratrarana ny fihazavana izay mitarika amin' ny fitsaharan' ny fanahin' ny zavamananaina iray amin' ny zavamananaina iray hafa (samsara), atao hoe môska na nirvana. Mandala ny fisainanana tsy misy herisetra (ahimsa) ny jainisma. Fanao ao amin' ny jainisma ny fandinihan-tena sy ny fifadian-kanina.
Fivavahana any Azia Atsimo-Atsinanana[hanova | hanova ny fango]
Ny sintôisma dia fitambarana finoana izay efa nisy tao amin' ny tantara tranain' i Japàna. Manafangaro singa avy amin' ny fivavahana pôliteista sy animista ny sintôisma. Io no fivavahana tranainy indrindra ao Japàna. Miisa any amin' ny 90 000 000 any ho any ny mpanaraka ny sintôisma ao Japàna.
Ny taôisma dia sady fivavahana no filôzôfia, izay miorina amin' ny fisian' ny foto-javatra niandohan' ny zavatra rehetra, atao hoe Taô. Avy amin' ny kolontsaina sinoa tranainy no misy ny fototry ny taôisma, izay miorina amin-dahatsoratra, ka isan' izany ny Tao Tö King nposoratan' i Lao Tseu, ny Lie Tseu sy ny Zhuāngzǐ nosoratan' i Tchouang Tseu.
Ny kônfosianisma dia fivavahana sy filôzôfia nivoatra nandritra ny taonarivo roa nanomboka tamin' ny asasoratr' ilay filôzôfa fantatra amin' ny anarana hoe Kônfosiosy (551-479 tal. J.K.), lamim-pandinihana lehibe miompana amin' ny fitsipi-pitondrantena, ny fahaiza-mitondra firenena, ny zavakanto, ny fahendrena azo ampiharina avy hatrany amin' ny fiainana, ary ny fifandraisana eo amin' ny fiarahamonina. Niely manerana an' i Sina sy i Kôrea ary i Japàna hatrany Vietnamy, ka lasa taharo tsy miovan' ny kolontsaina any amin' ny tany Farany-Atsinanana ny kônfosianisma. Ny foto-kevi-dehiben' ny kônfosianisma dia voarakitra ao amin' ny lahatsoratra sinoa dimy tranainy izay nolovana tamin' i Kônfosiosy sy ny mpianany niaina tamin' ny andron' ny dinastia Zhu (杼), tamin' ny vaninandro nampiroborobo izany filôzôfia izany.
↑ Ysé Tardan-Masquelier, Un milliard d'hindous, Albin Michel, 2007.
↑ "The Changing Global Religious Landscape", Pew Research Center's Religion & Public Life Project,‎ 5 avril 2017 (vakio [tahiry])
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fivavahana_tatsinanana&oldid=1038823"
Voaova farany tamin'ny 12 Oktobra 2021 amin'ny 17:55 ity pejy ity.